Home News Duufaano ku dhuftay Qeeybo ka mid ah Mareeykanka!!
Duufaano ku dhuftay Qeeybo ka mid ah Mareeykanka!!
Duufaantan ayaa kusoo aaday xilligii la saadaaliyay galinka dambe ee maalinta khamiista ah kuna dhuftay gobolka North Carolina.
Waxay sheegen inay filayeen daa’dad nolosha khalkhalgelinaya oo ka dhasha roobabka iyo dabeylaha sare u sii kacaya.
Xarunta qaran ee duufaannada Maraykanka ayaa sheegtay in Duufaantan ay ku socoto xawaare aad u sarreeya oo aan kala go’ lahayn islamarkaasna ay halkii saacba ay jareyso dhul ballaaran oo dhan 165 kiloomitar.
Waxayna intaasi ku dartay in ay filayso in isbedel yar uun ku yimaaddo inta aysan gaarin xeebaha.
In ka badan 1.7 milyan oo ruux ayaa la qorsheynayaa in laga daad gureeyo gobollada South iyo North Carolina, maryland iyo Virginia.
Mike Sprayberry oo ah madaxa ha’yadda North Carolina Emergency Management, oo dadka ka caawisa sida ay uga jawaabi lahayeen masiibooyinka inay khibrad ka heleen duufaantii dhacday sanadkii 2016-kii ayna yaqaanan sida loo daad gureeyo dad aad u tiro badan.
Madaxweyne Trump ayaa saxiixay amarro badan oo ku aaddan gurmadka degdega ah, wuxuuna sheegay inuu la hadlay dhammaan barasaabyada gobollada ay saameynta ku reebi karto duufaanta.
Ciidammada badda ee Mareykanka ayaa 30 markab u diraya badda si ay xaaladda ula socdaan islamarkaasna uga qayb qaataan dadaallada samata bixinta waa haddii duufaanta ay xeebaha dalkaasi ku dhufato
Previous articleSiyaasiin Muqdisho ka tagay Kuna Wajahan Deegaanadda Galmudug si ay xaliyaan Khilaafaadka ka Jira
Next articleM. Keating: “Madax baa ku timid musuqmasuq waxayna donayaan in ay musuq awooda ku sii haystaan”
Ciidamada Danab oo dhaq dhaqaaqyo ciidan kawada Gobolka Shabeellaha hoose